Miyuu u Hiiliyay Mise wuu Ka Hadhay Madaxweynuhu KULMIYE? | FooreNews
Home wararka Miyuu u Hiiliyay Mise wuu Ka Hadhay Madaxweynuhu KULMIYE?
Waa Tallaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca saxda ah. Waa marrag fur dhab ah oo Muujinaya ruug-cadaanimadiisa siyaasadeed iyo odaynimadiisa. Waa tusaale wax ku ool ah oo uu ku soo kordhiyay saaxaada siyaasadda. ee uu juhdiga adag u galay balaadhinteedda.
Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) shalay kama uu soo xaadirin maalintii afraad ee gunaanadka kaltanka ololaha doorashadda ee xisbi Xaakimka KULMIYE. Iyadoo ay dad badani filayeen inuu soo gabo-gabeyn doono ololaha doorashada ee xisbigiisa isla markaana uu khudbad u jeedin doono Taageereyaasha xisbigaasi ee magaaladda Hargeysa.
Arrintaasi waxay dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa ka bixiyeen dareeno kala duwan, iyadoo inta badan aqlabiyadda dadkii mawduucan ka doodayay ay ka bixiyeen arragti togan.
“Waa madaxweyne maalinba sadar cusub oo hor leh ku qoranaya buugga diiwaanka taariikhda suuban ee dalka,”ayuu ku tiraabay Cismaan Aadan oo ka mid ah ardayda wax ka barata Jaamacadda Hargeysa oo meherad shaaha laga cabo isaga iyo saaxiibadii ay kaga doodayeen asbaabaha dhaliyay in madaxweyne Axmed Siilaanyo kaga baaqday inuu ka qeyb gallo tartanka doorashadda.
Cismaan oo da’da sodomeeyadda madaxa la galay waxa uu intaasi ku ladhay “Waa bisayl siyaasadeed oo Madaxweynuhu gaadhay isla markaana uu bulshadiisa barayo inuu yahay Hoggaamiye dhegtiisa dhawranaya.”
Dadka la dhacay arrintani waxay doodooda sal uga dhigayeen in Madaxweyne Axmed Siilaanyo uu guul joogo mar walba, maadaama oo go’aankii uu soo saaray lagu furay ururadda siyaasadeed ee dalka ka hirgelisay
“Madaxweynuhu waa bud-dhigihii balaadhiyay saaxada siyaasada dalka. Waa Hoggaamiyihii qaraarka adag ku gaadhay inaan siyaasadda dalku kooto aanay ku sii haysan sadexdii xisbi qaran ee KULMIYE, UDUB iyo UCID,”ayuu yidhi Ibraahin Naaleeye oo ka mid ah dadka indho indheeya siyaasadda.
“Sidee ayuu ula yooyootami doonaa shanta urur siyaasadeed ee cusub ee aan go’aankiisa ku soo galay miidaanka siyaasadda,”ayuu intaasi ku daray Ibraahim Naaleeye.
Waxa jiray dad qabay aragti taasi ka duwan oo aaminsanaa in arrintani tahay mid muujinaysa sida xisbi xaakimku aanu wax war-wer ah uga qabin tartanka doorashada deegaanka ee dalka ka qabsoomaysa todobaadka dambe.
“Madaxweynihii hore Daahir Rayaalle waa uu ka qeyb gali jiray ololeyaasha doorashada ee xisbigiisii UDUB.
Madaxweyne Siilaanyo-se waxa uu dhigay rikoodh cusub oo waxa uu umaddiisa far-waaweyn ugu cadeeyay inuu yahay Hoggaamiye ay dhax u ah dalka oo dhan in kasta oo uu xisbigiisu yahay KULMIYE oo uu aasaasay 2002-dii,”ayay tidhi Muuna Axmed khayre oo ka mid ahayd mid ka mid ah taageereyaashii xisbiga KULMIYE ee ka soo qeyb galay isu soo bixii Beerta Xoriyadda Hargeysa.
Muna oo 25 jir ah isla markaana dhabanadeeda ku sibaaqday calanka xisbiga KULMIYE waxay arrintan ku sifaysay mid ka turjumaysa isbedelkii xisbigeedu dalka u balan qaaday xiligii ay mucaaridka ahaayeen.
“Madaxweynuhu ma noqon doono mid xadhig maran ah oo Axsaabta tartamaysa dhaliilahooda cay kaga jawaaba.
Waxase uu kula tartamayaa waxqabadka xukuumadiisu fulisay laba sanadood iyo dheeraad uu xilka hayay.
Waxqabadkaasi oo dad badan saameyn ku yeeshay haddii ay tahay mushaharooyinka shaqaalaha dawladda ee la kordhiyay iyo dugsiyada waxbarashada ee lacag la’aanta laga dhigay. KULMIYE wuu u qalbaa inuu ku soo baxo sadexda xisbi qaran ee doorashadan ka dhalan doona, ”ayay tidhi Muuna Axmed Khayre oo ku dhawaaqaysay Magaca Murashaxad Hodan Axmed Cabdilaahi oo ka mid ah 25-ka Murashax ee KULMIYE u soo sharay Golaha deegaanka Caasimadda Hargeysa.
Waxase jiray dad mawduucan si taban uga hadlayay oo ku dooday in arrintani ay halbeeg u tahay sida aanu Madaxweyne Siilaanyo xidhiidh adag ula lahayn xisbi xaakimka KULMIYE.
Si kastaba arrintu ha ahaatee waxa Madaxweynuhu qaaday tallaabo uu ku muujiyay inuu dhex u yahay axsaabta tartamaysa.
Previous PostXukuumadda Somaliland Oo Shaacisay xiliga La qeybinayo Darajooyinkii Ciidammadda Qalabka Sida Next PostMurashax Khadar Maxamed Warsame (Ina Dhagabadane) Oo Cududiisa Taageero Ee Ballaadhan Ku Soo Bandhigay Deeganada Woqooyiga Gabiley (Gogaysa,Baqo Dabaal, Boocda, Hadhlay)